Na dia fitaovana maoderina aza no ahafahana mamaritra ny firaisana ara-nofo amin'ny zaza ao anatin'ny tavy, raha vao 12 herinandro, tsy ny mummies rehetra no matoky an'io fomba io, ary indraindray aza azo antoka. Raha ny zava-misy rehetra, ny fitondran-tenan'ny ankizy ao amin'ny ultrasound dia tsy azo antenaina - afaka mamindra na mametraka toerana miteraka izy, ary ny dokotera dia tsy mandinika ny firaisana ara-nofo.
Vehivavy bevohoka, noho ny antony isan-karazany (matetika avy amin'ny fombam-pivavahana) dia manao tsirambina ny fitsaboana. Tsy ny fikarakarana fikarakarana fotsiny ihany no tokony homena, fa ny fitsaboana sy ny fanadinana samihafa ilaina mandritra ny fitondrana vohoka. Ny vehivavy toy izany dia tsy mandalo fanandramana an-tserasera, izay midika fa azony atao ihany ny manaiky ny firaisana ara-nofo amin'ny ankizy amin'ny endriky ny kibony sy ny finoana malaza mifandraika amin'ny sakafo ho an'ny reny amin'ny ho avy.
Ahoana no hamantarana ny firaisana ara-nofo ao amin'ny vavony?
Ny mamanay amin'ny ho avy dia mahagaga foana izay nipetraka tao anatiny. Ary izany fahalianana izany dia foana, ary tsy vao haingana vao haingana noho ny filàna ny hividianana dotan'ny loko manokana. Amin'ny fotoana rehetra, nanomboka tamin'ny andro fahiny, ny vehivavy dia nahafantatra ny fomba hamantarana ny firaisana amin'ny zaza amin'ny endrika kibo.
Arakaraka ny fahatelo fahatelo, ny karazam-bolo dia mahazo endrika miavaka kokoa amin'i Neny, ary fantany ny fomba hamaritana ny firaisana ara-nofo amin'ny zaza ao an-kibo, ary ny mijery ny fitaratra dia ho fantany hoe iza no hanantena azy. Na izany aza, ity dia tsara indrindra amin'ny hafa.
Raha manantena zazalahy iray ny vehivavy iray, dia tsy mahatsiaro tena intsony izy. Izany hoe, tsy azo jerena eo anoloana izany, saingy tsy voamarikao akory fa bevohoka ny vehivavy.
Ny singa faharoa mampiavaka ny reniben'ireo ankizilahy dia bodofotsy mahery miaraka amin'ny bokotra kiraro mitongilana. Toa manitsy azy ireo izany, izany no mahatonga ireo fasika hita sy hita maso. Ankoatra ny endriny, ny tovolahy miaraka amin'ny tovolahy dia ambany lavitra noho ilay tovovavy.
Eo amin'ny kibon'ny reninao, dia azonao atao ny mamaritra ny maha-lahy na maha-vavy ny zaza. Raha ny tovovavy dia, mavesatra be ny reniko amin'ny andaniny, dia miparitaka ny elany. Ny ombidia miaraka amin'ny zazavavy dia manodidina na mitovy, nefa tsy mahitsy sady ambony.
Saingy, na dia eo aza ny fisehoan-javatra hita eo amin'ny tontolon'ny ankizilahy na tovovavy, dia tsy voatery foana ny mamantatra izany amin'ny 100%. Ny tena marina dia miankina amin'ny toerana misy ny placenta ny endriky ny kibo.
Raha mifamatotra amin'ny rindrina na rindrina na rindrina, dia manodidina ny vavony, fa raha ny eo anoloana - avy eo dia mihetsiketsika na manjelanjelatra - toy ny zazalahy. Noho izany, amin'ny fanao, ny endrik'ilay kibo dia tsy mampiavaka ny firaisana manokana.
Faharoa faharoa amin'ny vehivavy
Fahadisoana amin'ny lehilahy
Fanimbazimbana ny folovita tsy voafora
Ny fiterahana: tovovavy na ankizilahy?
Fetal-fo fo - zaza na tovovavy
Mpikarakara ny lakozia
10 tsara kokoa ny fialan-tsasatra izay hanova tanteraka ny fiainanao
Toeram-pijerena ny varavarankely
17 vokatra ara-tsakafo izay tsy misy fetrany ho an'ny fiainany
Vehivavy matevina mainty - inona no tokony hatao?
Inona no atao amin'ny hafanana ambony?
Famantarana ny fikorontanana ao amin'ny zaza
Ahoana no ahatongavana any amin'ny paradisa?
Pasta misy tonon-kira
Tavoahangy vita amin'ny plastika plastika